नेपालमा एकैदिन २ हजार ३ सय वढी कोरोना संक्रमित थपिए – मातृभूमी
नेपालमा एकैदिन २ हजार ३ सय वढी कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा बुधबार एकैदिन २ हजार बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ३ सय ५१ जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङ्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमकले ८ हजार ८ सय ४४ जनामा गरिएको पीसीआर परिक्षण र ८ सय ३ जनामा गरिएको एन्टिजिन परीक्षण सहित करीब २४ दशमलव ३७ प्रतिशत व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको जानकारी दिए ।
थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाण्डाै उपत्यकामा १ हजार ५१ जना रहेका छन् । जस अन्तर्गत काठमाडौमा ७ सय ८७, ललितपुरमा १ सय ८१ र भक्तपुरमा ८४ जना रहेका छन् । योसँगै नेपालमा कूल कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ८९ हजार ७ सय ८७ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप १० जनाको कोरोना संक्रमणवाट मृत्यु भएको छ । योसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमणवाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार १ सय १२ पुगेको छ । यस्तै थप २ सय ७७ जनाले काेराेना संक्रमणलाइ जितेर घर फर्किएका छन् । योसंगै देशभर काेराेना संक्रमणलाइ जितेर घर फर्किनेकाे संख्या २ लाख ७६ हजार ८३ पुगेको छ । हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १० हजार ५ सय ८२ रहेको छ ।
पछिल्लो पटक थपिएका संक्रमित मध्ये २० वर्ष मुनिका २ सय ७६ जना छन् भने २० देखि २९ वर्षसम्मका ५ सय ४८ जना छन् । ३० देखि ३९ वर्ष सम्मका ५ सय ६४ जनामा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमित मध्ये ९ हजार ७ सय ४६ होम आइसोलेसन र ८ सय ३६ संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । तीमध्ये १ सय ३३ जना आइसीयू र ४७ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
हाल काठमाडौ, ललितपुर र बाँके जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले संक्रमितको संख्या उकालो लागेसँगै आइसीयू लगायतका शैयाको समेत अभाव हुने अवस्था देखिएको बताए ।
असारसम्म थप ३ लाखमा कोभिड हुनसक्ने सरकारको प्रक्षेपण
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असार मसान्त सम्म थप ३ लाख व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।मन्त्रालयले भर्चुअल विधिवाट गरेकाे पत्रकार सम्मेलनमा आगामी तीन महिना भित्र ३ लाख नयाँ संक्रमित थपिन सक्ने प्रक्षेपण गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले अबको ९ हप्ताको बीचमा संक्रमण दर निकै उकालो लाग्ने र कठिन समय आउन सक्ने बताए ।
असारसम्म १५ हजार व्यक्तिमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिने सक्ने भन्दै उनले लापरवाही बढ्दै गए असारको पहिलो साता भित्रै दैनिक ११ हजार संक्रमित थपिन सक्ने बताए । संक्रमितको संख्या बढेसँगै तत्काल १० हजार आइसोलेसन बेड बनाउनुपर्ने र आइसोलेसन सेन्टरका लागि प्रदेश सरकारलाई समेत निर्देशन दिइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले लागू गरेका मापदण्ड पालना गरेमा ठूलो चुनौती रोक्न सकिने र लकडाउनको अवस्था टार्न सकिने बताए । हाल २ हजार संक्रमितलाई उपचार गर्न सकिने रेमडिसिभर औषधि र ४ लाख पीसीआर किट मौज्दात रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।